.: ဂုဏ်သိက္ခာရှိပြီး တန်းဝင် မြန်မာ့တပ်မတော်ဖြစ်ရန် စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်မှု လျှော့ချရန်ပြော
ဂုဏ်သိက္ခာရှိပြီး တန်းဝင် မြန်မာ့တပ်မတော်ဖြစ်ရန် စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်မှု လျှော့ချရန်ပြော
According to the Ministry for National Planning and Development, foreign investment
has risen from 172 million U.S. dollars in 2007 - 2008, to the current 984.9 million.
The report released yesterday points out that 87% of deals are signed with Chinese businesses or companies. Russia and Vietnam have invested in oil and natural gas,
withaturnover amounting to 114 million dollars. Thailand focuses on the tourism
and hospitality sector and has invested about 15 million dollars in its neighbour.
Yangon (AsiaNews / Agencies)2009-7-17
မြန်မာ့တပ်မတော်ကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ တပ်မတော်တစ်ရပ်ဖြစ်စေရန် စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်နေမှုကို လျှော့ချရန်လိုအပ်သည်ဟု နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး လေ့လာသုံးသပ်သူများက သုံးသပ်
ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့် ကျွမ်းကျင်တန်းဝင်သည့် တပ်မတော်ဖြစ်ရန် စီးပွားရေးတွင်သာမက နိုင်ငံရေး
တွင်ပါ ပါဝင်နေခြင်းကို တဖြည်းဖြည်းချင်း လျှော့ချသွားရန် လိုအပ်သည်ဟု စီးပွားရေး လေ့လာ
သုံးသပ်သူ ဦးသန်းစိုး (ဘောဂဗေဒ)က ပြောသည်။
တပ်မတော်က တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ထားသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများသာမက နိုင်ငံသားများ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံကြသည့် လုပ်ငန်းများတွင်လည်း တပ်မတော်မှ အငြိမ်းစားယူသည့် အဆင့်မြှင့် အရာရှိ
ကြီးများ၊ လက်ရှိ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် အများစုနှင့် ဆက်နွှယ်သည့်သူများ
က အများဆုံးဖြစ်နေသည်ဟု ၎င်းက သုံးသပ်သည်။
တပ်က စီးပွားရေးဝင်လုပ်နေခြင်းမှာ နိုင်ငံတော်၏ ကူပံ့မှုအားနည်းခြင်းကြောင့်ဟု ယူဆသူများက
လည်း ရှိနေသည်။“တပ်က လိုအပ်တာကို နိုင်ငံတော်က ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရပါမယ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့ သူဘာသာသူ ဆုတ် သွားပါလိမ့်မယ်” ဟု ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး(ငြိမ်း)နှင့် လက်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော်
အမတ် ဦးလှဆွေက မဇ္ဈိမ ကို ပြောသည်။
မြန်မာစီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်သည် တပ်မတော်သားများ၏ အစုရှယ်များဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကာ
ရရှိသည့် အကျိုးအမြတ်များကို ၎င်းတို့အပြင် စစ်မှုထမ်းဟောင်းများကို ထောက်ပံ့ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်
ဟု အမည်မဖော်လိုသည့် အကြီးတန်းအရာရှိကြီး တစ်ဦးက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
“မိကျောင်းကန်မြေတွေကို သိမ်းစဉ်က လူမဆန်စွာ တပ်ကလုပ်ခဲ့တာ မြေတူးစက်တွေနဲ့ ထိုးခဲ့တယ်။ အဲဒီ မြေတွေဆိုရင်လည်း အခု ၂၃ နှစ်အထိဘာမှမလုပ်ဘဲ ဒီအတိုင်း ကျန်တာတွေ ရှိနေတယ်” ဟု တပ်သိမ်း မြေအတွက် အခွင့်အရေးပြန်ရရန် ခြောက်လကျော်တိုင် ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင် သပိတ်စခန်း
ဖွင့် ထိုင်သပိတ်ဖြင့် တောင်းဆိုနေသူ ဒေါ်နေနွယ်သန်းက ပြောသည်။
“တပ်လိုတာကိုဖြည့်ပေးရုံနဲ့ ဆုတ်မယ် ဆိုတာက ယေဘုယျဆန်ပါတယ်။ အခု အနေအထားအရ တပ်ကလုပ်နေတဲ့ ဖူလုံရေးဆိုတာကလည်း လုံလောက်တဲ့ပမာဏထိ ရနေပါပြီ။ လိုအပ်တာထက် ပိုပြည့်နေပါ တယ်” ဟု ဦးသန်းစိုးက ပြောသည်။ “အဓိကတော့ အာဏာနဲ့ ဓနကို မက်မောနေကြတဲ့
အတွက် အခုလိုတွေ တပ်ကပါနေတာပါ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ရေးအသုံး စရိတ်အတွက် ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး ဂျီဒီပီ၏
၃၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို အသုံးပြုနေပြီး ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးတို့ထက် အဆများစွာ ပိုမိုအသုံးပြုနေခြင်း
ဖြစ်သည်။ တပ်မတော်သုံးစွဲနေသည့် ဘတ်ဂျက်များကို လျှော့ချမည်ဆိုပါက လျှော့ချနိုင်သည့် အခြေအနေများရှိနေသည်ဟု ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း သူရဦးတင်ဦး က ပြောသည်။
တပ်က အင်ဂျင်နီယာကျောင်းဆင်းတွေကို အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်စေပြီး အရပ်ဘက် ပြန်ခိုင်းရင် သူတို့အတွက်လည်း အကျိုးရှိသလို နိုင်ငံအတွက်လည်း ဘတ်ဂျက်ပေး
ရတာ လျော့တာပေါ့” ဟု ၎င်းက သုံးသပ်သည်။
တပ်မတော်မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး သမ္မတ
ပြောရေးဆို ခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်အား မေးမြန်းရန် ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း ဆက်သွယ်၍မရခဲ့ပေ။
မြန်မာတပ်မတော်ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အဆင့်မီဖြစ်ရန် အနောက်နိုင်ငံများနှင့် စစ်ရေးဆက်ဆံမှု
များရှိရန် လိုအပ်သည်ဟု နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးကျော်လင်းဦးက သုံးသပ်သည်။